गिनिज बुक वोर्ल्ड रेकर्डमा २ पटक नाम लेखाउने नेपाली / दिनेस दुई तला देखि जम्प हान्न सक्छन::kamananews
गिनिज बुक वोर्ल्ड रेकर्डमा २ पटक नाम लेखाउने नेपाली / दिनेस दुई तला देखि जम्प हान्न सक्छन
खोटांग जिल्ला हलेशी तुवाछुंग गाउँ पालिकामा २०४८ सालमा बुबा बिर्ख बहादुर सिंह र आमा रिता सुनारको कोख बाट जन्मिएका दिनेश सुनार हाल नेपाल शसस्त्र प्रहरी बल खेलकुद शाखामा रास्ट्रिय जिम्न्यास्टिक एण्ड पार्कर खेलाडीको रुपमा कार्यरत छन् । उनले ‘गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड’ मा दुइ पटक आफ्नो नाम लेखाई सकेका छन् । पार्कर विधामा द मस्ट ब्ल्याक ट्वीस्ट वाल इन ३० सेकेन्ड १६ पटक २०१८ मा र द मस्ट ट्वीस्टीङ्ग ब्याक फ्लिप्स वाल इन १ मिनेट मा १८ पटक २०१७ मा गरेर दुइ पटक रेकर्ड राखी सकेका छन् ।
राजधानी काठमाडौँमा एक औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै उनले ‘गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड’ को सर्टिफिकेटलाइ प्रमुख अतिथि सशस्त्र प्रहरी बलका पुर्व आइ.जी.पी.सनत कुमार बस्नेतको हात बाट लिए । कार्यक्रममा पार्कर दिनेशलाइ प्रोत्साहन स्वरूप प्रभात पश्मिना उद्योगका संचालक अमरेन्द्र मण्डल र रन्जु रायमाझीको तर्फ बाट नगद एक लाख पनि प्रदान गरियो । उक्त कार्यक्रममा पार्करको बिषय बस्तुमा केन्द्रित रहेर चलचित्र निर्माणको घोषणा पनि गरियो । चलचित्रमा दिनेश प्रमुख भूमिकामा रहनेछन । चलचित्र निर्देशक मिलन च्याम्सले उक्त निर्माणाधीन चलचित्रको लागि दश लाख बराबरको इक्युपमेन्ट सहयोग गर्ने घोषणा गरे । चलचित्रको अन्य टिम र कास्ट भने फाइनल हुन बाँकि रहेको छ ।
उनि आफ्नो कला कौशलताले देशको नाम चिनाउन लागि परेका छन् । उनि अब तेस्रो रेकर्डको तयारीमा रहेका छन् । आफ्नो कला र मेहनतले बिश्व सामु आफ्नो देश र आफ्नो नाम राख्न सफल भएका दिनेश भबिस्यमा यहि पार्कर क्षेत्रमा नै रहेर अझै ठुलो योगदान गर्ने योजनामा रहेकाछन् ।
कति लाइ पार्कर भनेको के हो भन्ने ज्ञान नहुन सक्छ । एक बिन्दु बाट अर्को बिन्दुमा जाँदा आइ पर्ने बाधा ब्यबधानलाई सामान्य मानिसले भन्दा फरक तरिकाले त्यो पार गर्नु लाइ पार्कर भनिन्छ । प्रतिभावान दिनेशलाई अझै अघि बढ्न हौसला र अन्य आइ पर्ने आबस्यकता हरु पुरा गर्नको लागि उद्योगी ब्यबसायी समाज सेवी तथा कलाप्रेमी अमरेन्द्र मण्डल लागि परि रहेका छन् । ﻿
पञ्चायतमा नडराउने हास्य कलाकारअहिले कता हराए ?
मुलुकी संहितापछि गाईजात्रामा ‘सेल्फ सेन्सर’ मुलुकी संहितापछि गाईजात्रामा ‘सेल्फ सेन्सर’ गाईजात्राको मौसम शुरु भइसक्यो । तर, काठमाडौंमा अघिल्ला वर्षजस्तो व्यावसायिक गाईजात्राको रौनक छैन । राणा, पञ्चायतजस्तो कठोर शासनका बेलासमेत वर्षमा एकदिन जसलाई पनि व्यङ्य गर्न पाइने...
प्रियंकाको इंगेजमेन्टलाई लिएर शाहीदले दिए यस्तो अभिब्यक्ती
बलिउड नायिका प्रियंका चोपडा चाडै नै बैबाहिक सम्बन्धमा बाधिदैछन् । हिजो मात्र प्रियंकाले निक संग इंगेजमेन्टको औपचारिक खुशीयाली बाडेकी छिन् । उनले आफुभन्दा ११ बर्ष कान्छा निक संग विवाह गर्ने भएकी हुन् । उनको इंगेजमेन्टको...
हट बेडसिन बिवादपछि बल्ल बोलिन् नायिका प्रियंका कार्की
नायिका प्रियंका कार्की समय समयमा बिवादमा आईरहन्छिन् । फिल्म जगतमा उनको सकारात्मक चर्चा त छदैछ । फिल्म क्षेत्रमा नं १ नायिकाको रुपमा पनि धेरैले प्रियंकालाई चिन्छन् । यद्यपी पछिल्लो समय उनको चर्चा फिल्मबाट भन्दा...
‘मिलेगी मिलेगी तुझे भी मिलेगी’ र ‘कमरिया’ गीतपछि बलिउड अभिनेता राजकुमार राव र अभिनेत्री श्रद्धा कपुरको हरर कमेडी फिल्म ‘स्त्री’को तेस्रो गीत रिलिज भएको छ । ‘नजर न लग जाए’ बोलको यो रोमान्टिक गीतमा...
नेपाल टेलिभिजनले बेच्न सकेन ‘प्राइम टाइम’, अब के हुन्छन् कमेडी सिरियल ?
१ भदौ २०७५ नेपाल टेलिभिजनबाट प्रशारण हुने गरेका हास्यटेलिश्रृंखलाहरु लामो समयदेखि बन्द छन् । फलस्वरुप आठ बजेको समाचारपछिको पिक टाइममा टेलिभिजनले कुनै पनि मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । सो समयमा मिडिया हबले चार वटा...
छक्का पञ्जा ३’‘ को पहिलो नम्बरमा’गीतले बनायो नया रेकर्ड
यो बर्षको बहुप्रतिक्षीत चलचित्र ‘छक्का पञ्जा ३’को दुई साता अघि सार्वजनिक भएको ‘पहिलो नम्बरमा’मा गीतले युट्युवमा नयाँ रेकर्ड बनाएको छ । ‘पहिलो नम्बरमा ’ सार्वजनिक भएको १४ दिनमा नै ५० लाख बढीले हेरेर अर्को...
प्लास्टिक सर्जरीबारे ऐश्वर्याको स्पष्टीकरण
ऐश्वर्या राय बच्चनको सुन्दरताको प्रशंसा संसारभर हुने गर्छ । एक समय करण जौहरको ‘च्याट सो’मा इमरान हासमीले ऐश्वर्यालाई ‘प्लास्टिक’ भनेर खलबल मच्चाइदिएका थिए । ऐश्वर्याले प्लास्टिक सर्जरी गरेको हुन सक्ने आशंकाका आधारमा इमरानले त्यसो...
NCC बुसान तथा NRNA बुसान ले सेप्टेम्वर9तारीकमा तिज कार्यक्रम गर्ने
केसव रिमlल कोरिया हिन्दू नारी हरूको महान चाड हरितालिका तिज को अवसरमा नेपाली सम्पर्क समिती (NCC) बुसान तथा गैर आवाशिय नेपाली संगठन (NRNA) बुसान शाखा ले संयुक्त रूपमा यही आउदो सेप्टेम्वर9तारिख मा...
बलिउडकी सुन्दरी नायिका आलिया र रणवीर कपुर विबाह बन्धनमा बाधिदै
एजेन्सी – बलिउडकी सुन्दरी नायिका आलिया र रणवीर कपुर अर्को वर्ष विबाह बन्धनमा बाधिन सक्ने बताइएको छ ।भारतिय मिडियाका अनुसार रणवीरकी आमा नितुले आलियालाई मन पराएका कारण पनि यि दुईको बिहे अर्को वर्ष हुन...
नायिका आँचल शर्मा लाई गालीको वर्षा, फेरी हटाइन स्टाटस
नायिका अाँचल शर्माले अाफैले लेखेकाे स्टाटस हटाएकी छिन् । उनले शनिबार लेखेकाे स्टाटस फेसबुकबाट हटाएकी छिन् । आँचलले अाफैले लेखेकाे स्टाटसमा नकारात्मक कमेन्टहरू धेरै अाएकाले स्टाटस हटाएकाे हुनसक्ने बुझ्न सकिन्छ । अाँचलले लेखेकी थिइन-‘रुदै...